Myanmar OA6: ကျားမာန်စွယ်
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 2:44 PM
ကိုပွတ်ဝတ္ထုကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဗျာ နည်းနည်းဆက်ပါဦး ၀တ္ထုတို ကောင်းကောင်းလေးတွေဆို ကျွန်တော်ကသဘောကျတယ် အစ်ကိုက အတည်အခန့်ရေးလည်း စကားပြေကကောင်းတယ်ဗျာ နောက်လည်းဆက်ရေ.းပါဦးဗျာ ခင်မင်လေးစားလျှက်
အကိုရေ … အတွေးနယ်ချဲ့ပြီး ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသလို ဖတ်လို့လဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အိုအေစစ်မှာ စာတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ဖြစ်လာတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ နောက်လဲ ပို့စ်အသစ်တွေ ဆက်ရေးပါဦးနော်…။ ဒီလို ၀တ္ထုတို ပုံစံမျိုးလေးတွေရောပေါ့…။ ဒါနဲ့ ကျားမာန်စွယ်က ကျားတွေဆီ ပြန်ရောက်သွားလားဟင် … သေနတ်လှမ်းပစ်တဲ့ ရဲကို တစ်ချက်လောက် ခုန်အုပ်သွားတာ မဟုတ်ဘူးနော် …
တကယ်ဆို ကောင်းမယ်။ :D
အဲဒီ့ကျားသုံးကောင်ကို အတူပါလာတဲ့ သူရဲကောင်းက အမြီးကနေကိုင်ပြီး ဆွဲရမ်းလွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကို ဘာလို့ ထည့်မရေးတာလဲ မောင်ပွတ်ရ ... ။ ငါမှာတော့ ကျားသုံးကောင်ကို ဆွဲရမ်းလွှင့်ပစ်လိုက်ရလို့ လက်တွေတောင် ညောင်းနေတယ် ...။း-)
ကျေးဇူးပါ ကိုမိုးလှိုင်ညနဲ့ မစုဝေရေ။ ကိုသောကြာရေ - မုန့်ဟင်းခါးစားချင်ရင် ပုံးလိုက်ကျွေးပါ့မယ်။ ကျားနဲ့တော့ မစနဲ့နော်။ သားကြောက်လို့။ ကိုနေဘုန်းလတ် - ဆက်ရန်လေး ရေးပေးပါ့မယ်။
တော်တော်ကို ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဗျို့.....
Very Good Writing Mg Put! Cheer!